Akaundi yangu - Network maRadio
musha / Nhoroondo My
Nyorera kune yedu tsamba tsamba uye ugamuchire zvakaderedzwa pane zvemberi mirairo
PTT4U inyika-ye-ye-iyo-network network sevhisi sevhisi kune nyanzvi Kuvimba nechiratidzo cheGSM, mawairesi edu achakwanisa kutaura kune mumwe nemumwe pasina chero ganhuriro. Radiyo yega yega inoshanda neSIM kadhi (isina kubatanidzwa) uye inoshandisa GSM / 3G / 4G uye mamwe mamodheru anoshanda kunyange nechiratidzo cheWiFi. Izvi zvinoreva haufanire kushandisa mari yakawanda pane inodhura redhiyo infra-zvivakwa, zvinodzokorora, maantena kana nzvimbo saiti. Yese network network infra-chimiro chinopihwa neye GSM inotakura. Yakavanzika uye yeboka mafoni anowanikwa. Nhengo dzako dzechikwata dzinogona kunge dziri munyika dzakasiyana uye dzichiri kusvika. Mushandisi wega wega anogona kutarisa nzvimbo yemumwe nemumwe (zvichibva paprofile yavo), tumira mameseji uye SOS yambiro. Zvese zvaunoda kuti uite, kutenga maratidziro enetiweki, zvinoenderana nezvinodiwa, isa SIM kadhi yako yaunofarira pamaredhiyo (chirongwa chepamwedzi che data che500MB chinokwana) uye Nyorera gore rega PTT4U sevhisi. Iwe unozoda gore rimwe chete $ 49 kunyoreswa kune imwe nhepfenyuro. Uye ndizvozvo! Hapasisina kutemwa nemusoro.